ISisonke isishintshwa igama | IOL Isolezwe
ISisonke isishintshwa igama
Isolezwe / 31 May 2012, 12:10pm /
KULINDELEKE ukuthi ngenyanga yamagugu kuleli uMengameli we-African National Congress uMnuz Jacob Zuma, azobhabhadisa ukushintshwa kwegama loMkhandlu iSisonke District eseliqanjwe ngomholi owayenohlonze emzabalazweni uHarry Gwala.
Selubheke emaphethelweni uchungechunge lokushintshwa kwaleli gama njengoba lusesemigudwini kahulumeni efanele. Lokhu kuvele kuthangi ngesikhathi iMeya walo Mkhandlu uKhansela Mluleki Ndobe, noMkhandlu bethula isabelo-mali sokuqala salo Mkhandlu ngaphansi kobuholi obusha obungene ngoMeyi nyakenye.
Amaqembu aphikisayo akulo Mkhandlu okuyiNkatha Freedom Party, National Freedom Party neDemocratic Alliance, awazange asiphikise lesi siphakamiso ngesikhathi ecelwa ukuba aphawule ngaso kuhlanganisa nesabelomali sisonke kodwa aseseka.
“Igama likababa uHarry Gwala, laqhamuka nomphakathi waseSisonke. Uyalazi iqhaza lakhe kulendawo emzabalazweni wenkululeko yabantu, futhi wasebenza naye isikhathi eside ngesikhathi lesi sifunda sisengaphansi kweMidlands, sihlangene noMgungundlovu. Yindlela yokumhlonipha lena, ukubonga iqhaza lakhe ngesikhathi esihle sekhulunyaka, kanjalo nokuqhakambisa siphinde songe umlando ngamaqhawe akithi,” kusho uNdobe.
UNdobe uphinde wancoma neqhaza labaholi abaqhamuka kulesi sifunda abayibamba ishisa nabakade beqhakanjiswa ngesikhathi isihlonti sekhulunyaka sikaKhongolose sikulesi sifunda ekupheleni kuka-Ephreli, okungo-Zenyuse Mkhulisi, Reggie Hadebe, Pass-Four Phungula, Boy Gwala noDavid Ndawonde. NgokukaKhongolose lesi sifunda siyi-Harry Gwala Region vele kanti uNdobe unguSihlalo waso.
Kusabelomali sakhe uNdobe uphinde wamemezela nezindaba ezinhle zokuthi umasipala waKwaSani e-Underberg onamawadi amane, ungomunye kwabambalwa uma bekhona, abangenankinga nhlobo yamanzi njengoba zonke izakhamizi zakulo masipala sezinawo futhi kungekho zikhalazo ngokuphakelwa kwawo.
“Lo masipala yingakho uthola isabelo esincane nanokuthi mncane nangokwezibalo zezakhamizi, siwunika u-R5 million wamanzi ukuze bakwazi ukuwagcina ephuma kompompi. UMasipala uMzimkhulu osanda kufakwa KwaZulu-Natal, nonamawadi amaningi kanti usasilele emuva ngokuphakwa kwamanzi nokusingathwa kwendle, siwabele u-R76 million bese kuza Ingwe ngo-R62.5 million, uBuhlebezwe ngo-R40 million. Ngenxa yokuthi idolobha iKokstad silinake kakhulu ngoba liyisizinda sethu somnotho alisasilele kakhulu ngamanzi kulokhu sizolinika u-R10.5 million,” kwaba uNdobe.
Okunye okubhabhadiswe yiloMkhandlu, yisinqumo sokuthi uqhubeke nezinhlelo zokuthuthukisa ezolimo kanjalo nezokuvakasha. “Singabanye esifundazweni abahamba phambili ekukhiqizeni ubisi kanti lokhu kwabalulwa nawuNdunankulu ethula inkulumo yakhe yesifundazwe wathi kuzomele kuthuthukiswe. Enye imboni esinothe kakhulu ngayo nedinga ukuthuthukiswa ngeyezamahlathi ngoba nayo inothile eSisonke. Umkhakha wezokuvakasha njengoba izintaba zoKhahlamba zilengele kithina, nawo usezinhlelweni ezinqala zokuthi siwuthuthukise njengoba siwufake ngaphansi kwezinhlelo zokufukulwa komnotho,” kusho uNdobe.